हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्स :कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २९ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्स :कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २९ भदौ २०७५)
on: September 14, 2018 लगानी
हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्स :कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २९ भदौ २०७५)
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी ऐनपूर्वक स्थापना भई बीमा ऐन–२०४९ बमोजिम सञ्चालित निर्जीवन बीमा कम्पनी हो । २०५० साल साउन १३ गते बीमा समितिबाट कारोबार सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गरेको कम्पनीले २०५० साल मङ्सिर १६ गतेदेखि कारोबार शुरू गरेको थियो । ग्राहकको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दु मानी सेवा दिन सदैव प्रयत्नशील यस कम्पनीले आव ०७४/७५ को चौथोे त्रैमासमा रू. १४ करोड ६ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १५ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि हो । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. १२ करोड १४ लाख नाफा कमाएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. २३ करोड २९ लाख आम्दानी गर्न सफल भएकाले नाफा बढेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी १ सय ६६ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेपछि पूँजी बढेको हो । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएसँगै हकप्रद शेयर जारी गरेको हो । कम्पनीले आगामी दिनमा बजार विस्तार केन्द्रित गरी व्यवसाय विविधीकरण गर्दै जाने रणनीति लिएको छ ।
कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १६ करोड ३३ लाख छुट्याएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय ११ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. ७ करोड ७२ लाख छुट्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा बीमा कोषमा रू. ४० करोड १३ लाख जम्मा भएको छ । सोही अवधिमा कम्पनीले रू. २३ करोड २९ लाख आम्दानी गर्दा रू. ९ करोड २२ लाख खर्च भएको छ ।
चालू सम्पत्ति कर्जा तथा पेस्की रू. १ अर्ब ७७ करोड ३९ लाख रहेको छ भने चालू दायित्व तथा व्यवस्था रकम रू. ८६ करोड ५६ लाख रहेको छ । कम्पनीको जारी बीमालेख सङ्ख्या ४१ हजार ४ सय ६ रहेको छ भने नवीकरण गरिएको बीमालेखको सङ्ख्या १६ हजार ९ सय ७९ रहेको छ ।
असार मसान्तसम्ममा ४ हजार ७ सय ६० जनाले रू. ३ अर्ब ४९ करोड दाबी भुक्तानी गरेका छन् भने १ हजार २ सय ७१ जनालाई रू. १ अर्ब ५३ करोड दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौथोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १३ दशमलव ७०, मूल्य आम्दानी अनुपात ३२ दशमलव ८६, प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ५४ दशमलव ९७ र प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. २ सय ३९ दशमलव २५ रहेको छ । बिहीवारको शेयरमूल्य नेटवर्थको साढे २ गुणा बढी छ ।
विक्री चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप ३ गुणा बढी छ । सो अवधिसम्म ५ हजार १ सय ८७ कित्ता शेयर विक्री र १ हजार ७ सय ४ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो मारोबोजु आकृति बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (४५ दशमलव ५१ स्केल) मा छ । यसले खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन २ दशमलव ६८ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम र प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने मूल्य रेखाभन्दा तल छ । यदि बिहीवारको शेयर मूल्य रू. ४ सय १७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. ४ सय २१ मा प्रतिरोध पाउने र मूल्य सस्तिएमा रू. ४ सय १४ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, १३ भदौ २०७५)
हिमालयन जनरलले १ सय ६६ प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढायो
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ११ चैत २०७४)
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ४ चैत २०७४)